R/wasaaraha Britain iyo madaxweynaha Maraykanka oo bogaadiyey xidhiidhka labada dal. – Radio Daljir
R/wasaaraha Britain iyo madaxweynaha Maraykanka oo bogaadiyey xidhiidhka labada dal.
Washington, Mar 13 -Reysalwasaaraha dalka Britain iyo Madaxweynahaa Maraykanka ayaa bogaadiyey calaaqaadka labada dal ,waxana ay ku tilmaameen mid assasi ah , waxana hadalkaan labada massuul uu imanayaa iyadoo David Cameroon uu qorsheynayo in booqasho uu kutago magaalada Washington.
Booqasho 3 maalmood ah oo reysalwasaaraha Britain David Cameroon ku tegayo dalka Maraykanka ayaa laga hadlayaa waxa lagu tilmaamay wejiga 3aad ee xilliga kala guurka ah ee dalka Afghanistan.
Xiisadda arrinta Nukleerka ee Iran iyo rabshadaha ka oogan dalka Syria ayaa sidoo kale meel sare kaga jira agendayaaasha ay ka wadahadlayaan labada dal.
Labada dal ee Maraykanka iyo Britain ayaa isbahayasi ku ah arrimo badan oo caalamka, waxana hogaamiyayasha labada dal ay xaqiijiyeen in isbahaysigoodu uu ku salaysanyahay cilaaqaadka ay wadaagaan iyo qiyamka guud ee ka wada dhexeeya.
Iyadoo ciidamada caalamiga ah ee ku sugan dalka Afghanistan ay qorsheynayaan in ay halkaasi kabaxaan sanadka 2014ka ayaa wixii xilligaasi ka dameeya massuuliyda ammaanku ku wareegaysaa ciidamada dalka Afghanistan.
Hadaba labada hogaamiye ee Obama iyo Cameroon ayaa ka xaajoonaya sidii kor loogu qaadilahaa kartida ciidamada ammaanka ee Afghanistan si ay u hantaan massuuliyadda dalkooda.
Wadaxajoodka Madaxweyne Obama iyo reysalwasaare Cameroon ayaa la sheegaya in lagu qeexo diblamaasiyadda lagu waajahayo barnaamijka Nukleerka ee Iran.